DHEGEYSO: Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo tagaya magaalada Xudur | Hadalsame Media
Home Wararka DHEGEYSO: Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo tagaya magaalada Xudur
DHEGEYSO: Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo tagaya magaalada Xudur
(Muqdisho) 10 Luulyo 2018 – Madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay gaaran magaalda xudur ee gobalka bakool.
Ujeedka booqashada labadaas masuul ayaa lagu sheegay u kuurgalida xaalada nolaleed ee kajirta gobalkaas,iyadoo bulsahda kunool bakool ay walaac ka muujinayaan xaladaha ay ku sugan yihiin.
Maalmo kahor ayuu halkaas tagay gudoomiya baarlamaanka maxamed mursal,waxaana uu shalay hadal ka jeediyey kalfadhiga baarlamaanka maamulka k/galbeed, iyadoona socdaalkiisa maanta ee xudur uu noqon doono kii ugu horeeyey tan iyo markii la doortay inuu noqdo gudoomiyaha golahah shacabka dalka.
Previous articleSAWIRRO: AC Milan oo soo bandhigtay funaanadda 2-aad & KHALAD ku jira!! (Daawo)
Next articleDHEGEYSO: Xildhibaano katirsan Hirshabeelle oo sheegay inaysan socon howlihii maamulka sababo amni dartood